ABSDF ပြည်တွင်း လေ့လာရေး ခရီးစဉ် သွားရန် ဦးအောင်မင်းနှင့် သဘောတူ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ဒေသန္တရသတင်း > ABSDF ပြည်တွင်း လေ့လာရေး ခရီးစဉ် သွားရန် ဦးအောင်မင်းနှင့် သဘောတူ
ABSDF ပြည်တွင်း လေ့လာရေး ခရီးစဉ် သွားရန် ဦးအောင်မင်းနှင့် သဘောတူ	ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ)	| သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၂၇ မိနစ်	စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့်ကျောင်းသား တပ်မတော် ABSDF တို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၌ သောကြာနေ့က တွေ့ဆုံကြပြီးနောက် အချက် ၂ ချက်ကို သဘောတူနိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ABSDF အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ရဲဘော် မျိုးဝင်း က ပြောသည်။“ABSDF အနေနဲ့ ပြည်တွင်းကို လေ့လာရေး ခရီးစဉ်ကို သွားရောက်ဖို့ကို မကြာမီ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရယ်နဲ့နောက်တချက်က တရားဝင် နှစ်ဖက် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ သဘောတူ နိုင်ခဲ့ကြတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။တရားဝင် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဆက်လက် ပြုလုပ်မည့် အချိန်နှင့် ပြည်တွင်း လေ့လာရေး ခရီးစဉ် သွားရောက်ခြင်း အချိန်တို့အား နောက်ပိုင်း၌ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့နှင့် ဆက်လက် ချိတ်ဆက်ကာ အတည်ပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနေနှင့် ပြည်တွင်းသို့ လေ့လာရေး ခရီးစဉ် သွားရောက်ရခြင်းမှာ တစုံလုံး အခြေအနေအား သိရှိနိုင်ရန်၊ ABSDF လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် အလားအလာများကို အကဲဖြတ်နိုင်ရန်နှင့် ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ အားလုံးနှင့်လည်း တွေ့ဆုံနိုင်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်သည့် ခရီးစဉ် ဖြစ်သည်ဟု ရဲဘော် မျိုးဝင်း က ပြောသည်။ယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးအောင်မင်းနှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့် ရခြင်းအတွက် အလားအလာကောင်းသည့် အခြေခံ ရှိပြီး နောက်ထပ်လည်း နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် သဘောတူ နိုင်ခဲ့၍ အလားအလာ ကောင်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်သည်ဟု ABSDF ဘက်မှ သုံးသပ်သည်။ ABSDF ဘက်မှ ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်သံခဲ ဦးဆောင်၍ ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦးဖြင့် ဦးအောင်မင်းတို့ အဖွဲ့အား သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့်အတူ ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် Myanmar Peace Center မှ အဖွဲ့ဝင် အချို့တို့သည် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သေး သည်။ ဤဆွေးနွေးပွဲသည် ဤနှစ် မကုန်မီ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အကြို ညှိနှိုင်းခြင်း ဖြစ်သည် ဟုလည်း ဆိုသည်။“ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း အခြား အဖွဲ့တွေ အတူတူ ရောက်တုန်း UNFC ကို ညစာ စားပွဲ ဖိတ်လိုက်တာပါ။ အဲဒီ မတိုင်ခင် ကျနော်တို့ ဘက်က တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးကြတာပဲ ရှိပါတယ်။ အထွေ အထူးတော့ မရှိပါဘူး” ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်တဦးဖြစ်သည့် ဦးလှမောင်ရွှေ က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ထိုသို့တွေ့ဆုံခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ UNFC နှင့် မေးမြန်းနိုင်ရန် မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ် ခဲ့သော်လည်း အဆက်အသွယ် မရနိုင်ခဲ့ပေ။ဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် စနေနေ့ နံနက်ပိုင်း၌ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နှင့် ဆက်လက် တွေ့ဆုံမည် ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ကိုညိုအုန်းမြင့်က ပြောသည်။
အစိုးရအဆက်ဆက် စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျဟု အမေရိကန်မှာ မြန်မာသမ္မတပြော
ဦးအောင်မင်းနှင့် PNLO ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆွေးနွေးမည်	အစိုးရဘက်မှ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်နေဟု ABSDF ပြော	ABSDF ၏ ပထမဆုံး အကြိမ် ပြည်တွင်း လေ့လာရေး ခရီးစဉ် စတင် KIO နှင့် အစိုးရ ဇန်နဝါရီလမှာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမည်	လူ့အခွင့်အရေးနေ့တွင် ဦးအောင်မင်း လက်ရှိအခြေအနေ ရှင်းပြ	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် KIO ဘက်မှ အကြောင်းမပြန်နိုင်သေး	လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် နိုင်/ကျဉ်း ၄၅ ဦး ထပ်လွတ်လာ	Who is Online
We have 107 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved